पशुपतिको “वि'रुपाक्ष कलीमन्दिर”मा तो’डफोड, नागको मूर्ति चो'री ! - Hamro Abhiyan
पशुपतिको “वि’रुपाक्ष कलीमन्दिर”मा तो’डफोड, नागको मूर्ति चो’री !
पशुपति क्षेत्रमा रहेको विरुपाक्ष मन्दिरमा तो’डफो’ड गरिएको छ । मानसिक सन्तुलन गु’माएकी एक महिलाले बुधबार तो’डफो’डको प्रयास गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।तो’डफो’डको प्रयास गरिएको वि’रुपाक्षको मन्दिरलाई कलीको मन्दिरका रुपमा मानिसहरुले विश्वास गर्दछन् ।घ’टनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको महिलाले तो’डफो’डको प्रयास गरेको कोषले जनाएको छ ।
एक महिलाले वि’रुपाक्ष मन्दिरको काठको ढोका फो’रेर भित्र पसी मूर्ति तो’ड’फोड गर्ने उद्देश्यका साथ मूर्ति ह’ल्लाउन खोजेको समेत बताइएको छ ।ती महिलाले मन्दिरबाट लगेको तामाको नाग भने गौशाला प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ ।आधा शरीर जमिनमुनि गाढिएको ढुंगाको मूर्ति वि’रुपाक्षलाई कलिदेवताका रुपमा चिनिन्छ। कलियुगको समय जति छिप्पिन्छ त्यति नै यो मूर्ति जमिनबाट माथि आउने जनविश्वास छ। जब कलिको पूरै मूर्ति माथि आउँछ तब क’लियुगको अन्त्य हुने कथन छ। वि’रुपाक्षको मूर्ति नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति रहेको समेत बताइन्छ।
त्यसैगरी हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान शिव धेरै नाम छन् । त्यही धेरै नामहरुको बिचमा एउटा यस्तो नाम छ सायदैं त्यसका बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनसक्छ । हो, महादेवसँग हरेक नामसँग सम्बन्धित केहि कथाहरू छन्। जस्तै उनलाई निलकंठ भनिन्छ, किनकि उनले त्यो बेलामा समुन्द्रमा फैलिएको सबैं विष आफुले सेवन गरेर समस्त प्राणिहरुको रक्षा गरेका थिँए ।
जसको कारण भगवान शिवको अवतारलाई निलकण्ठको नामले पुर्कान थालियो । यसबाहेक, धेरै अन्य नामहरू छन् जसका साथ केहि कथाहरू जोडिएका छन्। तर आज हामी तपाईंलाई भगवान पशुपतिनाथको बारेमा जानकारी गराउँदैंछौं । आखिर किन पशुपतिनाथलाई महादेवको पशुपति भनिन्छ आउँनुहोस जानौं केही तथ्यहरु…..
नेपालमा पनि शिव मन्दीर छ जसलाई हामी पशुपतिनाथ मन्दीर भन्छौं । यो पशुपतिनाथ मन्दीरमा शिवलिगं स्थापित गरिएको छ । यो भनिएको छ कि यहाँ विराजमान शिवलाई ज्ञान प्राप्तिको स्मारक को रूप मा स्थापित गरिएको थियो,जसलाई पशुपत भन्ने गरिएको थियो । शास्त्रहरुमा भनिएको छ कि भगवान शिवलाई पशुपत नैं भनिन्थ्यो । तर पछि गएर उनी पशुपतिनाथ भएका हुन ।
उनी जनवारका स्वामी थिए जनवार जसलाई अर्को शब्दमा पशु भनिन्छ त्यसैंले पनि पनि उनको नाम पशुपति बन्न गएको विश्वास गरिएको छ । शिवलाई जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै चम्किलो भनिएको छ। भगवान शिवको बज्र सबैभन्दा शक्तिशाली छ। शिव पशुहरूलाई बचाउन र मानवता विरुद्ध व्यवहार गर्नेहरुको नाश गर्न सक्छन । शिव जी धेरै शान्त स्वभाव भएका भगवान हुन,त्यसैले उनी आफ्नो हात हतियारको प्रयोग गर्न आवश्यक ठान्दैनन ।
उनले असल मानिसका विरुद्ध कहिल्लै पनि हात हतियार उठाएका छैनन तर गलत प्रवृति भएका मानिसहरु माथि भने उनले आफ्नो अस्त्र वेलावेलामा प्रयोग गर्ने गरेका छन। कहिलेकाहीँ मानव र जनावरहरूको शोकमा सहभागि हुन उनीहरुसँगैं आएका थिँए । शिवले तिनीहरूलाई शरण दिए र सत्य बाटोमा हिंड्न सल्लाह दिए।
तर जसले आफ्नो स्वार्थ र रिस पूरा गर्ने सोचले शिव भगवानको कुरालाई इन्कार गरे भगवान शिवले आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरेको विश्वास रहँदै आएको छ । भगवान शिव को यो हतियार केवल कल्याण को लागि हो,यसकारण यसलाई शुभ वज्र भनिन्छ। मानिसहरु जस्तै शिव भगवानको दिलमा जनवारहरु प्रति पनि उत्तिकैं प्रेम र सद्भाव रहेको थियो । यस कारण उनले पशुपति नाम पाए। यसैले उनलाई पनि पशुपतिनाथ भनिन्छ।